China Customized Steel Formwork orinasa sy mpamatsy |Lianggong
Ny formwork vy namboarina dia vita amin'ny takelaka vy vita amin'ny tava misy taolan-tehezana sy flanges ao anaty maody mahazatra.Ny flanges dia misy lavaka amin'ny elanelana sasany ho an'ny fivorian'ny clamp.
Ny formwork vy manokana dia matanjaka sy maharitra, noho izany dia azo ampiasaina imbetsaka amin'ny fananganana.Mora ny mivory sy manangana.Miaraka amin'ny endrika sy firafitra raikitra, dia mety tsara ny mihatra amin'ny fanorenana izay ilana rafitra mitovy endrika, ohatra, trano avo, lalana, tetezana sns.
Custom vy formwork azo namboarina ara-potoana araka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Satria ny tanjaky ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy, ny vy vita amin'ny vy dia manana azo ampiasaina avo lenta.
Ny formwork vy dia afaka mitahiry ny fandaniana ary mitondra tombony amin'ny tontolo iainana amin'ny dingan'ny fanorenana.
Ny famoronana formwork vy dia mitaky dingana famokarana kely indrindra.Maro ny fomba fanamboarana vy, iray amin'izany ny solosaina modeling.Ny dingan'ny modeling nomerika dia miantoka fa ny vy dia miforona araka ny tokony ho izy amin'ny fotoana voalohany niforonany sy niforonany, ka manamaivana ny filana fanavaozana.Raha azo amboarina haingana ny formwork vy, dia ho haingana ihany koa ny hafainganam-pandehan'ny asa an-tsaha.
Noho ny tanjany, ny vy dia mety amin'ny tontolo iainana tafahoatra sy ny toetr'andro ratsy.Ny fahombiazany manohitra ny harafesina dia mampihena ny mety hisian'ny loza ho an'ny mpanao trano sy ny mponina, ka manome tontolo iainana azo antoka ho an'ny rehetra.
Raha jerena ny azo ampiasaina sy azo averina amin'ny laoniny ny vy, dia azo raisina ho fitaovana fanorenana maharitra izy io.Noho izany, mihamaro ny orinasa manao safidy amin'ny fampandrosoana maharitra mba hampihenana ny fahasimban'ny tontolo iainana.
Amin'ny ankapobeny dia rafitra vonjimaika ahafahan'ny simenitra azo rarahana sy azo antoka mandritra ny fametrahana azy.Ny formwork vy dia misy takelaka vy lehibe voaaro miaraka amin'ny bara sy mpivady fantatra amin'ny anarana hoe asa sandoka.
Lianggong dia manana mpanjifa maro eran'izao tontolo izao, nanome ny rafitra formwork any Moyen-Orient, Atsimo-Atsinanan'i Azia, Eoropa sy ny sisa.
Ny mpanjifanay dia natoky hatrany an'i Lianggong ary niara-niasa taminay mba hitady fampandrosoana iombonana.
* Tsy misy assembling, miasa mora amin'ny endrika formwork.
* Henjana avo, manao endrika tonga lafatra ho an'ny simenitra.
* Ampiasaina betsaka, toy ny tranobe, tetezana, tonelina, sns.
Rindrina hety, metro, slab, andry, trano fonenana & varotra.
teo aloha: Plastic Slab Formwork
Manaraka: Cantilever Climbing Formwork